Amakhemikhali: ingabe ulawula isimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Chemtrails, ingabe ulawula isimo sezulu?
Emhlabeni oqhubeka uminyene, ukwehluka okumangalisayo kwemibono, imibono, kanye nemibono eyenziwayo kwenza kwesinye isikhathi kube nzima kakhulu ukuthola okungokoqobo kokucatshangelwayo. Nami ngokwami ​​kufanele ngivume ukuthi ezikhathini eziningana ngiyingabaze isayensi, kepha njalo, lapho ngiqeda ukufuna imininingwane eyiqiniso, okungukuthi, ngemuva kokufunda izifundo ezenziwe ngongoti, ekugcineni ngigcine ngikholelwa kukho futhi.
Futhi yilokho kanye esingakwenzi kwesinye isikhathi: funa imininingwane bese uyiqhathanisa. Namuhla i-Intanethi yenze impilo yaba lula kakhulu kithina, kodwa futhi yenze kwaba nzima ngandlela thile. Kusivumele ukuthi sikholelwe emibonweni enelukuluku, futhi enye yazo ngeyokuthi Amakhemikhali. Ngabe bashintsha isimo sezulu ukunciphisa inani labantu emhlabeni? Lutho neze. Futhi ngizochaza ukuthi kungani.
1 Umsuka wethiyori yeChemtrails
2 Yiziphi izinhloso ezicatshangelwa yiChemtrails?
2.1 Ukunciphisa inani labantu
2.2 Impi yezinto eziphilayo noma zamakhemikhali
2.3 I-Alter DNA
2.4 Kusabalala izifo
2.5 Ukulawulwa kwesimo sezulu
3 Ingabe bukhona ubufakazi?
4 Ezinye izinto ezingasenza singabaze
5 Ngabe isimo sezulu sike salawulwa?
5.1 Iphrojekthi yeHaarp
5.2 Iphrojekthi ye-SURA
6 Ingabe zikhona izizathu zokukhathazeka?
Umsuka wethiyori yeChemtrails
Ithiyori ye-Chemtrails noma inkolelo-mbumbulu yama-chemtrails okuthiwa ashiywe yizindiza yadalwa nguRichard Finke ngo-1997, owaba ngowokuqala ukugxeka ubukhona besitebhisi obekumele buqede isintu. Leli gama, nokho, alizange lidume eminyakeni emibili kamuva, futhi lenza lokho lisuka esandleni (kunalokho, kusukela ezintanjeni zezwi) lentatheli uWilliam Thomas.
Naphezu kwakho konke, abavikeli bale mbono bathi ama-chemtrails aqala eminyakeni eyedlule, okungenangqondo kakhulu kusukela, njengoba sizobona ngezansi, enye yezinhloso zeChemtrails ukunciphisa inani labantu emhlabeni, futhi lelo inani elandayo. Eqinisweni, njengamanje sesiseduze nokufinyelela kwizigidi eziyizinkulungwane ezingama-7.500 njengoba ubona le webhu, kwathi ngo-1997 kwaba nabantu abayizigidi ezingu-5.850 njengoba kuchazwe yiphephandaba El País osukwini lwakhe.
Yiziphi izinhloso ezicatshangelwa yiChemtrails?
Ukunciphisa inani labantu
Enye yezinjongo ezinkulu, njengoba sishilo, ukunciphisa inani labantu emhlabeni. Kungani? Angazi, yize ngisola mhlawumbe kufanele silawulwe kangconoOkuyinto engakholeki ngomqondo oqinile wegama, ngesizathu esilula sokuthi empeleni akunakwenzeka ngabantu abambalwa ukulawula izigidi zabantu, noma ngabe bacebe ngamandla.
Impi yezinto eziphilayo noma zamakhemikhali
Lokhu kuhlobene impela nokwedlule. Izimpi zihlala zilwelwa izizathu ezithile, kungaba ukuthi izwe libe nokutholakala okukhulu kukawoyela, noma ngoba lifuna ukuthola uhlobo oluthile lomcebo. Noma kunjalo, abantu bafa njalo, futhi isikhathi esiningi bangabantu abangenacala. Kepha kulabo abancintisanayo, abantu bayilokho nje, abantu, izinombolo.
Impi yebhayoloji noma yamakhemikhali ngeke ithathe kuphela izimpilo zezinkulungwane noma zezigidi zabantu, kodwa futhi ingenza izinto zibe lula kakhulu kubaholi abazenzayo.
Mhlawumbe ukwenza isibalo sabantu kube lula ukusilawula. Ukuqhathanisa kunenzondo, kepha abanye bacabanga ukuthi uma bonke abantu beziphatha ngokufanayo, besizofana nomhlambi wezilwane: kulula ukuphatha, kulula ukuwulawula.
Kunezifo eziningi ezisongela impiloNjenge-anthrax, ngokwesibonelo, uma izinto ezibabangelayo ziphefumulelwe - kulokhu, amagciwane - impilo yalowo muntu isengozini enkulu yokufa.
Ukulawulwa kwesimo sezulu
Kungaba ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, noma ukuyibangela.
Ingabe bukhona ubufakazi?
Cha. Isikhathi lapho okushiyana khona emoyeni kufanele kube sincane kunesama-chemostels, kepha iqiniso ukuthi isikhathi sincike emazingeni okushisa, kwingcindezi nasomswakama. Yonke imizila ingahlala amahora uma izimo zivuma.
Futhi kuthiwani ngamaphethini angabonakala esibhakabhakeni? Kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi amaphethini afisa ukwaziwa abonakala esibhakabhakeni, njengemigqa ehambisanayo noma enqamulelayo, eyenzelwe ama-conspiranoids ubufakazi obungenakuphikiswa bokuthi iChemtrails ikhona. Kepha akunangqondo. Njengamanje kunezinkulungwane zezindiza ezindizayo ngakho isibhakabhaka asikaze sicace bha. Ubufakazi balo mfanekiso:
Isithombe - Radarvirtuel.com
Uma lokhu sikucabangela, nokuthi okuphikisayo kungahlala esibhakabhakeni isikhathi eside, umbono weChemtrails awuthembekile. Ngaphezu kwalokho, Izikhathi eziningi ukwephula esikubona esibhakabhakeni empeleni kungamafu eCirrus, ezakhiwa ezindaweni eziphakeme kakhulu (ngaphezulu kwama-5km).
Ezinye izinto ezingasenza singabaze
Lolu hlobo lwendiza lusetshenziselwa ukufafaza.
Kunezinto ezithile esizikhiqizayo esibhakabhakeni noma ezinomthelela oqondile kuzo ezingasenza singabaze iChemtrails, njengokulandelayo:
I-iodide yesiliva ihlakazekile ukukhiqiza amafomu efomu akhishiwe.
Kushunqiselwa esibhakabhakeni ukuqeda izinhlupho, njengomiyane baseMedithera, isibonelo.
Imilayezo ibhalwa emoyeni njengezipho noma nganoma yisiphi esinye isizathu.
Imicibisholo yasemkhathini namarokhethi angadala ukwephula.
Izinto zisakazeka emkhathini ongaphezulu ukuze zikutadishe.
Ngabe isimo sezulu sike salawulwa?
Futhi ekugcineni, sifinyelela kulokho okusithandayo. Ukukhohlisa kwesimo sezulu. Uma uhlala endaweni lapho selivele lana kancane, futhi ubona ukuthi lina kancane kancane, kulula kakhulu ukukholelwa emfundisweni yeChemtrails, futhi uthukuthele lapho ubona ukuthi isibhakabhaka sinamafu manje futhi emizuzwini eyi-10 wonke amafu ilahlekile. Kepha, Ungakwazi yini ukulawula isimo sezulu? Ngabe kwake kwenziwa?
Impendulo iwukuthi Yebo, kodwa hhayi ngendlela esingase sicabange ngayo. Eqinisweni, okuhlosiwe akulimazi inani labantu, kepha kunalokho ukuvimbela izinhlekelele. I-Cloud seeding inqubo esetshenziswe emazweni lapho isomiso siyinkinga enkulu ngokusabalalisa iodide yesiliva esibhakabhakeni., njengeChina, India noma i-United States, kepha kuze kube manje abakatholi miphumela emihle kakhulu.
Endabeni ethile yeChina, kuyaziwa ukuthi badubula amarokhethi nge-iodide yesiliva ukuqeda isomiso esasithinta iBeijing ngo-2009 ukuze kudale ukuwa kweqhwa. Futhi baphumelela: amaPekingese akwazi ukujabulela izinsuku ezintathu zokuwa kweqhwa kusukela ngo-1987.
Kepha yebo, kukhona labo abafuna ukudlulela phambili.
Iphrojekthi ye-HAARP, noma i-High Frequency Advanced Auroral Research Project, ehunyushelwe olimini lwesiSpanish kuzoba yiHigh Frequency Active Aurora Research Program, kuwumsebenzi owenziwa yi-United States Navy and Air Force ukutadisha i-ionosphere. I-ionosphere ungqimba loMhlaba olusendaweni engaphezu kwama-48km ukusuka kwiplanethi futhi efinyelela ku-350km ukuphakama.
Lokho ososayensi be-HAARP Project abakwenzayo thumela imishayo yemvamisa yomsakazo ngaphakathi kolwelwesi oselubaliwe, oluhamba amabanga amade ngomkhathi ophansi futhi lungene emhlabeni. Ngokwenza njalo, bangathola imigudu engaphansi komhlaba noma baxhumane nemikhumbi-ngwenya ecwilisiwe, phakathi kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Kepha kunenkinga encane: emhlabeni iplanethi kukhona ugesi "ezintantayo" obizwa nge-aureal electrojet. Lapho amandla efakwa kuyo, okwamanje kuyashintshwa futhi kuvulwa imvamisa ephansi kanye namagagasi aphansi kakhulu, ngakho-ke i-HAARP yiphrojekthi eyenziwe ukushisa i-ionosphere - okungaba yiqiniso ngoba banamandla okwenza lokho - futhi ngaleyo ndlela basebenzise isimo sezulu somhlaba wonke ngemiphumela engalindelekile.
I-SURA, noma ukufakwa kwe-Ionospheric Heating ngeSpanish, Isikhungo sokucwaninga se-ionosphere etholakala edolobheni laseVasilsursk, eRussia. Iyakwazi ukukhipha cishe amandla ayi-190 MW asebenza ngamandla (i-PRE) ngamagagasi amafushane. Okwamanje isevisi eqhutshwa yiNIRFI Radio Research Institute eNizhny Novgorod.
Abaphenyi baseRussia Bahlose ukutadisha i-ionosphere, nokuthi imiphumela yesizukulwane sokukhishwa kwemvamisa ephansi inamiphi imiphumela kuyo. Ngakho-ke kulingana neRussia nomsebenzi we-HAARP.
Ingabe zikhona izizathu zokukhathazeka?
E-Australia isomiso siyinkinga enkulu.
Yebo. Bambalwa impela, kepha hhayi ngenxa yeChemtrails, kodwa ngenxa yethonya esinalo emvelweni. Ukungcola, ukugawulwa kwamahlathi, ukulahlwa kobuthi ezilwandle nasemifuleni, ... konke lokhu kuzogcina kusithwalise kanzima. Abanye bacabanga ukuthi sesivele singene enkathini entsha yokwakheka komhlaba, i- i-anthropocene, lapho isintu siphule ukulinganisela kwemvelo kweplanethi.
Kunengqondo ukuthi uma uhlala endaweni lapho kuna imvula encane, kufanele ukhathazeke ngokuthi ayina kakhulu, kepha ngaphambi kokukholelwa emibonweni yozungu, kungcono kakhulu ukuvakashela iwebhusayithi ye I-AEMET ukuthola ukuthi yimaphi amazinga okushisa nemvula abhalwe ngenyanga efanayo eminyakeni embalwa eyedlule. Kungathatha isikhathi eside, kepha ukuphela kwendlela yokuthola idatha nezimpendulo ezinokwethenjelwa.
Ngethembe. Emhlabeni kunezinto eziningi okufanele ziguquke, kepha awukwazi ukushintsha okungekho. Mayelana nalokhu, i-AEMET uqobo lwayo ithe blog Bengingazi ukuthi iSpain ibizama ukulawula isimo sezulu, kepha labo ababevame ukukhuluma ngalo mbono bavela ezifundeni zezwe lapho imvula isivele iphansi, njengaseningizimu naseningizimu-mpumalanga yenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic.
Mina uqobo ngihlala esifundeni esomile kunazo zonke eMallorca, lapho kuqoshwa khona cishe ama-350mm minyaka yonke, kanti isimo sezulu siyinkinga engikhathazayo, futhi eningi, ngoba nayo iyindawo yezivakashi futhi nasezinsizeni zamanzi zasehlobo ziyindlala. Kepha lapha njengoba kunamarekhodi bekulokhu kunemvula encane, futhi kungalindelwa ukuthi njengoba iplanethi ifudumala izokwenza kancane esifundeni saseMedithera njengoba sikutshele Lesi sihloko. Ngakho-ke akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokwamukela.
Ngiyethemba lokhu okuthunyelwe kube nentshisekelo kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Chemtrails, ingabe ulawula isimo sezulu?
kwenza Izinyanga ze-9
Hhayi-ke, unephutha, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ososayensi abakulesi sikhungo se-BBC bakwamukele ukuthi kunezindiza eziguqula isimo sezulu, bakhathazekile ngezinhloso zaseChina zokuqinisa ukuqhuma kwamafu, jah, izitatimende zakho aziqinisekisiwe, futhi iqinisekisa ukuthi isayensi yayigcwele abantu abakhethekile ukuqamba amanga kubantu
Iqhwa lase-Antarctica lizwela kakhulu ekushintsheni kwesimo sezulu
UDonald Trump uyaqhubeka nokucabanga ngokuthi angahoxa yini Esivumelwaneni saseParis noma cha